Flacon: Chishandiso chekubvisa maturu edhiyo muLinux | Linux Vakapindwa muropa
Si vane kudiwa kwekutora imwe kana kupfuura maturu edhiyo chishandiso chinotevera les inogona kubatsira zvakanyanya. Flacon uri Uyemahara uye yakavhurwa sosi app yakagoverwa pasi peiyo GNU Library Ruzhinji Rezinesi vhezheni (LGPL) vhezheni 2 yakanyorwa muC ++ uye yakavakwa uchishandisa raibhurari yeQt. Iyo inobvumira vashandisi kuburitsa yega matraki kubva kumahara makuru maodhiyo
Flacon chishandiso chakagadzirwa nechinangwa chekubvisa matriki ega ega kubva kune yakakura odhiyo faira iro rine iro rese mimhanzi album uye chengeta ivo semafaira akaparadzaniswa eodhiyo. Kuti uite izvi, shandisa ruzivo kubva kune yakakodzera CUE faira.
Iyi sarudzo yakanakisa kana iwe uchida kushandura maturu ako edhiyo kuita mafaera edhijitari, unogona kuabvisa uye nekuteerera zvakare pane ako ekushandisa.
1 Nezve Flacon
1.1 Maitiro ekuisa Flacon paUbuntu, Debian uye zvigadzirwa?
1.2 Maitiro ekuisa Flacon paFedora uye zvigadzirwa?
1.3 Maitiro ekuisa Flacon paArch Linux uye zvigadzirwa?
1.4 Maitiro ekuisa Flacon paRosa Linux?
Zvese zvaunoda iCD drive uye nerubatsiro rweFlacon uye nenguva diki, yako yekuunganidzwa odhiyo inogona kuve yakazara dijitari uye yazvino.
Chaizvoizvo zvinoitwa neFlacon kubvarura maCD ekuteerera kusevha mafaera ari kubuda mualbum pane yako system, iyo inogona kuendesa yako nhare / inotakurika chishandiso. Kuti uite izvi, Flacon inoshandisa ruzivo kubva kuCUE faira.
Uyezve, Flacon inokutendera kuti uongorore kana kudoma ma tag akakodzeras, zvese zviri zviviri matiraki panguva imwe chete, uye kune rimwe nerimwe zita zvakasiyana.
Pindai hunhu hukuru hweFlacon iyo yatinogona kuratidza tinowana:
Purogiramu inotsigira inotevera mafomati odhiyo mafomati: WAV, FLAC, APE, WAVPack, True Audio (TTA) uye ine rutsigiro rweanotevera mafomati ekuteerera sekuburitsa: FLAC, WAV, WAVPack, AAC, OGG kana MP3.
Unogona kuita playback kuwana ongororo izvi zvinogona kuitwa nenzira dzinotevera: track kuwana uye track kuwana modes.
Iko kunyorera kunogona kuita yakawanda-yakavezwa tambo yekushandura maitiro.
Iyo ine otomatiki hunhu seti yekutsvaga yeCUE mafaera.
Bhodhoro parizvino iri mushanduro yayo 4.1.0, iyi yekuvandudza yainyatso kuitirwa vhezheni yako yeMacOS kuitira kuti ivandudze kuenderana kwayo uye mashandiro ayo.
Maitiro ekuisa Flacon paUbuntu, Debian uye zvigadzirwa?
Hongu qvanoda kuisa iyi application pane yavo system ivo vanofanirwa kuvhura terminal Ctrl + Alt + T uye unomhanya unotevera mirairo:
Para nyaya yeUbuntu uye zvigadzirwa ivo vanofanirwa kuita zvinotevera pane chinouraya:
Kana vari uchishandisa Debian 8 kana chinobva mukumhanya uku:
Kunyange, kana ivo vatove kushandisa yazvino vhezheni yakagadzika, iri Debian 9 kana chimwe chinobva yeizvi vanoita:
Iye zvino zvese zveUbuntu, Debian uye zvigadzirwa zvichibva zvawedzera zvinyorwa zvatinofanira kugadzirisa iyo rondedzero yezvinyorwa ne:
Y pakupedzisira tinoisa iko kunyorera na:
Maitiro ekuisa Flacon paFedora uye zvigadzirwa?
Naps uchishandisa Fedora, Korora kana chimwe chinobva unogona kuisa iyo application kubva kumahofisi epamutemo kugovera, kune izvi unogona kushandisa software centre kana package package yesarudzo yako.
Iwe unogona zvakare kuiisa kubva kune iyo terminal ne:
Maitiro ekuisa Flacon paArch Linux uye zvigadzirwa?
Yenyaya yekuisirwa paArch Linux, Manjaro uye yakatorwaiwe unofanirwa kuve neAUR repositori inogoneswa mune yako pacman.conf faira.
Uye iwe unogona kuisa chishandiso nemirairo inotevera:
Maitiro ekuisa Flacon paRosa Linux?
Iwe uri mushandisi wekugovera uku here? Usatombo kunetseka futi Flacon inogona kuiswa pane ino Linux distro kubva kune ayo epamutemo marekodhi.
Iwe unongofanirwa kuita unotevera kuraira mune yako terminal:
Uye wakagadzirira nayo, iwe unenge watove ne software iyi yaiswa pane yako system iyo iwe yaunogona kuwana mune ako ekushandisa menyu yakagadzirira kushandiswa.
Kana iwe uchiziva nezvechimwe chikumbiro chakafanana neFlacon, usazeze kugovana nesu mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Flacon: Chishandiso chekubvisa maturu edhiyo muLinux
Yakanaka chirongwa chema flacs anouya aine cue
Yakakura chirongwa, inowanikwawo seSnap;)
Ivo varikushandisa chirongwa mulinux kana windows, kana iri linux ndiudze kuti ndeupi musoro wenyaya iwoyo
Chirongwa ichi ndechekupenga, ini chete ndine mp3 nenziyo dzese dziri paAlbum, ini handina maflacs kana cue avo vauri kutaura nezvazvo.
Carlos Santos akadaro
Sezvo iwe usingakwanise kutaura, zvirinani dzidza kumwe kuverenga kuverenga.
Pindura Carlos Santos
mhoro ndine raspbian uye ini handikwanise kuiisa.
unogona kundipa ruoko here?